८० वर्षीया आमाको आग्रहपछि केसीको रगत जाँच
काठमाडौं । ८० वर्षीया आमा मित्रकुमारी शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवनको सिँढी उक्लँदै आफूलाई भेट्न आएको देखेर सोमबार डा.गोविन्द केसी केही क्षण अवाक् बने। दुवै बीच हेराहेर भयो। एक अर्काबीच हेराहेर भइरहँदा दुवैका आँखामा आँसु छचल्कियो।
आमा मित्रकुमारीकै आग्रहपछि सोमबारै डा. केसीको रगत परीक्षण भएको छ। उनको रगतमा सेता रक्तकोशिकाको संख्या अहिलेसम्मकै न्यून देखिएको र अक्सिजनको मात्रा पनि कम देखिएको बताइएको छ।
रगतमा पोटासियम, म्याग्नेजियम र क्याल्सियमको मात्रा पनि नबढेको पाइएको छ। केसीको स्वास्थ्यस्थिति झन् कमजोर रहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले बताइन्।
रगतमा ग्लुकोजको मात्रा पनि न्यून रहेकाले यसको मात्रामा कमी आएसँगै शरीरका अंगले विस्तारै काम गर्न छाड्ने बताइएको छ। ग्लुकोेजको मात्रा घट्दै गए त्यसको गम्भीर असर मस्तिष्कमा पर्ने देखिन्छ, बेहोस हुने जोखिम रहन्छ।
काठमाडौं आएपछि मुटुको चाल नाप्न समेत नमानेका डा.केसीले इसीजी मनिटर जडान गर्न पनि स्वीकृति दिएका छन्। १५औं पटकको अनशनको २४औं दिनमा पुग्दा डा. केसी भेट्न आएका शुभेच्छुकसँग दोहोरो वार्तालाप गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
सोमबार दिउँसो पौने दुई बजे भेट्न आएका पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई केसीले हात जोडेर नमस्कार गरे। त्यस्तै पूर्वमन्त्री पशुपतिशमशेर राणा, सुनील थापा, पूर्वप्रहरी प्रमुख ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्वराजदूत जयराज आचार्य, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा, डा.केदारनरसिंह केसी, कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडालगायत व्यक्ति भेट्न पुगेका थिए।
उनीहरू सबै अनशनरत डा.केसीलाई हेरेर मात्रै फर्किए। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू लक्ष्मी परियार, विजया केसी, निर्मला क्षेत्री पनि डा.केसीलाई भेट्न पुगेका थिए।
भेट्न आउने शुभेच्छुकका कारण संक्रमण हुने जोखिम रहेकोले दश मिटर टाढाबाट अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
केसीको जीवन दिनप्रतिदिन जोखिम अवस्थामा गइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले स्तब्ध भएको जनाएको छ। यस्तै केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै मंगलबारदेखि चिकित्सकहरू पनि विरोध कार्यक्रममा उत्रने भएका छन्।
चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रन लागेका हुन्। मुलुकभरका चिकित्सकहरूले मंगलबारदेखि आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको नियमित ओपीडी टिकट, रसिद, बिल, बहिष्कार गर्न संघले अपिल गरेको छ।
बिरामीको स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी वैकल्पिक उपायद्वारा ओपीडी सेवा भने सञ्चालन गरिने संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, चिकित्सकहरूले आआफ्नो जिल्लामा रिले अनशन, र्‍याली, धर्नालगायतका विरोध कार्यक्रम गर्दै नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सशक्त विरोध गर्ने जनाएका छन्।
संघका पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण चिकित्सकलाई वसन्तपुर डबलीमा उपस्थित भई बिहान दश बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म सत्याग्रहमा बस्ने निर्णय गरिएको संघका महासचिव डा. कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आवासीय चिकित्सकहरूले सञ्चालन गरेको बहिरंग र अन्तरंग सेवा बहिष्कारप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७५, मंगलवार